'Kingdom' စာ​ရေးဆရာမရဲ့ drama အသစ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ​အလားအလာရှိနေတဲ့ Gong Yoo နဲ့ Kim Tae Ri
‘Kingdom’ စာ​ရေးဆရာမရဲ့ drama အသစ်မှာ ပါဝင်ဖို့ ​အလားအလာရှိနေတဲ့ Gong Yoo နဲ့ Kim Tae Ri
​​တောင်ကိုရီးယား အနုပညာ​​လောကက ​စူပါစတား ၂ ဦးဖြစ်တဲ့ မင်းသား Gong Yoo နဲ့ မင်းသမီး Kim Tae Ri တို့ဟာ ‘Evil’ ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သွားဖို့အတွက် ​ဆွေး​နွေးတိုင်ပင်​နေတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်​နေ့မှာ အနုပညာနယ်ပယ်က အတွင်းလူတစ်ဦးက “မင်းသမီး Kim Tae Ri ဟာ ဇာတ်ညွှန်း​ရေးဆရာမ Kim Eun Hee ရဲ့ ပ​ရောဂျက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ ‘Evil’ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ဖို့ ​ဆွေး​​​နွေး​နေပါတယ်” လို့ ​ပြောကြားခဲ့တာပါ။
ဒီလို သတင်းထွက်ပြီး​နောက် မကြာမီမှာပဲ မင်းသား Gong Yoo ကို ဒီဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ​ခေါင်း​​ဆောင်မင်းသား​နေရာအတွက် ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့ ထပ်မံသတင်းထွက်​ပေါ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဇာတ်ညွှန်း​ရေးဆရာမ Kim Eun Hee ဟာ tvN ရဲ့ ‘Signal’ နဲ့ ‘Jirisan’, Netflix ရဲ့ ‘Kingdom’ ဇာတ်လမ်းတွဲ​တွေကို ​ရေးသားခဲ့ပြီး ​အောင်မြင်​ကျော်ကြားတဲ့ ဇာတ်ညွှန်း​ရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသား Gong Yoo က​တော့ ‘Coffee Prince’, ‘Goblin’, ‘Train To Busan’, ‘The Silent Sea’ ဇာတ်ကား​တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ဖူးပြီး ကမ္ဘာ​တစ်ဝှမ်းမှာ လူကြိုက်များတဲ့ မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီး Kim Tae Ri က​တော့ ‘The Handmaiden’, ‘Space Sweepers’, ‘Mr. Sunshine’ ဇာတ်ကား​တွေမှာ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ဖူးတာ​ကြောင့် လူသိများတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာ​တော့ မင်းသား Nam Joo Hyuk နဲ့ ‘Twenty-Five Twenty-One’ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးလျက်ရှိပါတယ်။
ဒါ​ကြောင့် ပရိသတ်​တွေဟာ ‘Evil’ ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကို​ရော Gong Yoo နဲ့ Kim Tae Ri တို့ရဲ့ ​ပေါင်းစပ်မှုကို​ရော စိတ်ဝင်တစားရှိ​နေပြီး ​ကောင်းမွန်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်​​တွေ​ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို​တော့ လာမယ့် ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ ထုတ်လွှင့်ပြသနိုင်ဖို့ စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။
Photo : Instagram, Netflix
Next 'GRAMMYs' ပွဲကြီးမှာ ပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေခွင့်ရတဲ့ Kpop အဆိုတော် ဖြစ်လာသည့် B.I. »
Previous « 'The Red Sleeve' drama ထဲက bed scene နဲ့ ပတ်သက်ပြီး spoiler ​အကြီးကြီးပေးခဲ့တဲ့ Jun Ho နဲ့ Se Young
ကြည့်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့ Zhao Liying နဲ့ Zhang Zhehan တို့ရဲ့ ရှေးဟောင်းဇာတ်လမ်းသစ်
“Best Songs Of 2021” စာရင်းမှာ နာမည်ရယူကာ Kpop ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ BTS နဲ့ aespa